सेयर बजार « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
काठमाडौं । सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको आइतवार बसेको सञ्चालक समितिको बैंठकले १३ प्रतिशत वोनस शेयर तथा शून्य
काठमाडौं । सनराइज बैङ्कको सहायक कम्पनी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब रुपैयाँको सनराइज फस्र्ट म्युचअल फण्ड निष्कासन गर्न लागेको छ । सनराइजले असोज ८ गतेदेखि १० रुपैयाँ दरका १० करोड
सिर्जना फाइनान्सको हकप्रद विक्री असोज १७ गतेदेखि
काठमाडौं । सिर्जना फाइनान्स लिमिटेडको हकप्रद शेयर असोज १७ गतेदेखि विक्रीमा आउने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट साउन २० गते स्वीकृति पाएसँगै कम्पनीले २७ लाख ६४ हजार ६९२ कित्ता
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड -१ को बुक क्लेज
काठमाडौं। सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-१ ले गत आवको नाफाबाट इकाइधनीहरुको लागि ले ७ प्रतिशतका दरले नगद प्रतिफल वितरण गर्ने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि योजनाको
वोमी लघुवित्तको अवितरित हकप्रद लिलामीमा
काठमाडौं । वोमी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेडको संस्थापक तथा सर्वसाधारण समूहको अवितरित हकप्रद लिलामीमा विक्री हुने भएको छ । कम्पनीले संस्थापकतर्फको ७६ हजार ७०३ दशमलव ८० कित्ता तथा सर्वसाधारणतर्फको ४६
पौने २ अर्बको हकप्रद सेयर निष्कासनको तर्खरमा ४ बिमा कम्पनीः हेर्नुहोस् ! कसको कति ? (सुचिसहित)
काठमाडौं । बिमा समितिले पुँजी बढाउन दवाव दिएपछि ४ ओटा बीमा कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेका छन । ती कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर न्युनतम पुँजी पुर्याउन लागेका हुन
यी आयोजनाका आउँदै छन आइपिओ, हेर्नुहोस् कुन आयोजनाले कति निष्कासन गर्ने ?
काठमाडौ । माथिल्लो अरुण आयोजनाले सर्वसाधारणको लागि साधारण सेयर (आइपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । जनताको जलबिद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत १०६० मेगावाटको यस आयोजनाले आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको हो । नेपाल
काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २५ प्रतिशत साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । प्राधिकरणलाई कम्पनी मोडेलमा लगेर सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले नाफा
सेयर बजारः साताको पहिलो दिनमै उच्च अंकले घट्यो नेप्से, यस्तो छ आजको कारोवार
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आज आईतबार नै नेप्से उच्च अंकले घटेको छ । नेप्से आज १७ दसमलव ८७ अंकले घटेर ११ सय ४० दसमलव शुन्य एक अंकमा पुुगेको छ
शेयर बजारमा कालोधन रोक्नको लागि नयाँ निर्देशिकाः यस्तो छ व्यवस्था !
काठमाडौं । आउँदो असोज १ गतेदेखि शेयर बजारमा कालोधन रोक्नको लागि नयाँ निर्देशिका लागू हुँदैछ । नयाँ निर्देशिकामा २५ लाखभन्दा माथिको कारोबारलाई निगरानी गर्ने व्यवस्था गरिँदैछ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले